आज घट्यो सुनको मुल्य, कति पुग्यो तोलाको ? थाहा पाउनुहोस् – Fewa Times
आज घट्यो सुनको मुल्य, कति पुग्यो तोलाको ? थाहा पाउनुहोस्
प्रकाशित मिति: March 14, 2019 1:04 pm
फागुन ३०, काठमाडौं – बिहीबार सुनको मुल्य ओरालो लागेको छ। बुधबारको तुलनामा आज सुन १ सय रुपैयाँले घटेको छ।
आज छापावाल सुन प्रतितोला ६० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला ६० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज तेजावी सुनको मुल्य पनि ओरालो लागेको छ। आज तेजावी सुन ६० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। हिजो तेजावी सुन ६० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
आज चाँदी प्रतितोला ७४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका जिल्लामा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोके बमोजिम सुन चाँदीको मूल्य केही बढी पर्न सक्ने छ।